Ole Gunnar Solskjaer Oo Sharraxay Sababtii Uu Uga Cadhooday – Axadle
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa daboolka ka qaaday inuu ka cadhooday weeraryahanka Marcus Rashford intii ay socotay ciyaartii ay Manchester United waqtiga oo dhamaaday rikoodhaha loo dhigay ee ay guusha ka gaadheen Brighton.
Weeraryahanka reer England ayaa lagu dhaleeceeyey bandhig liita oo uu la yimid kulankii Crystal Palace ee toddobaadkii hore oo uu maqane jooga iska ahaa, laakiin ciyaartii Brighton ayaa uu isbeddel sameeyey, waxaana laga diiday gool uu dhaliyey.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa tibaaxay inuu jeclaan lahaa in Rashford uu gool dhaliyo, waxaana ka sokow goolka uu jeclaan lahaa inuu loollan adag la yimaaddo oo uu kubadda raadsado marka ay difaaca Brighton haystaan.
“Wuu soo fiicnaanayay oo fiicnaanayay laakiin xoogaa yar ayaan ku riixay inuu qaybta kale u socda qaybtii hore ee ciyaarta oo uu kubadda raadsado. Waxay ila tahay in falcelintiisa iyo fiiqnaantiisuba ay wanaagsanaanayaan. In badan ayuu toosan yahay, isku kalsoon yahay, waxaanu dhaliyey gool qurux badan waxaanay ahayd wanaagsan inkasta oo laga diiday. Waxay ila tahay in Marcus uu dhab ahaantii bilaaban doono xili ciyaareedkan.” Ayuu yidhi Ole Gunnar Solskjaer oo warbaahinta la hadlay kaddib dhamaadkii ciyaarta.
Manchester United ayaa rikoodhe daqiiqaddii 110aad loo dhigay uu gool ugu beddelay Bruno Fernandes, waxaana uu Solskjaer qirtay sida uu ugu farxay rikoodhahaas guusha u horseeday, isagoo dhinaca kalena si cad u sheegay in aanay u qalmaynin guusha. “Markii aanu barbarraynay waxa aan u maleeyey in aanu laba dhibcood luminay. Waxa laga yaabaa in waxa aanu u qalmaynay ahayd hal dhibic, ilama aha in aanu wax ka badan u qalmaynay laakiin qaabkayagu wax intaa ka badan ayuu u qalmayay.”